59 ayaa ku dhimatay Nairobi - BBC Somali
59 ayaa ku dhimatay Nairobi
Image caption Ciidamada kenya ayaa la dagaalamaya kooxaha mintidiinta ee weerarka soo qaaday.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in konton iyo sagaal ay ku dhinteen xarunta tukaamada Westgate ee Nairobi. Mintidiinta islaamiyiinta Al shabaab oo weerarka soo qaaday shalay ayaa wali dhismaha ku haysta dad ay afduubeen.
Wasiirka ammaanka Joseph Ole Lenku, ayaa sheegay in boqol iyo toddobaatan iyo shan qof ay dhaawacmeen, in kabadan kun qofna laga badbaadiyay weerarka dhismaha.
Weerarka ayaa bilaabmay Sabtidii markii mintidiinta Al shabaab ay soo weerareen xarunta dukaamada ee Wesgate.
Wariyaha BBC ayaa sheegay in xabado la maqlayo, helikobtarana ay dulmarayaan goobta, ciidamo dheeraad ah ayaa goobta la keenay. Ciidamo ammaan oo Israiliyiin ah ayaa ku jira dadka lagu haysto gudaha dhismaha.